Tim Cook akatengesa makumi matatu ezviuru anokwana $ 30.000 mamirioni | Ndinobva mac
Ichi chikamu chidiki, chidiki kwazvo, chezviito zvese zvainazvo mune iye iye iye zvino CEO weApple. Izvo zvine musoro kufunga kuti aya masheya akatengeswa mazuva mashoma apfuura akagadzirirwa kubhadhara neimwe nzira kudonha kwemubhadharo kwaCook, nekuda kwezvinangwa zvekutengesa zvisina kuzadzikiswa mukati megore, chimwe chinhu icho vazhinji vedu taisatomboita asi kana vakuru vakuru vemakambani mazhinji kana makambani ehukuru hweApple, saTim Cook pachake, anogona kuzviita.
Chiito hachisi chitsva mubhizinesi renyika uye Cook haasi wekutanga uye haazove wekupedzisira kuita rudzi urwu rwechiito kuripa kudzikiswa kwemihoro kunokonzerwa nekusasvika pazvinangwa zvakagadzwa, asi chokwadika, kuve Apple uye CEO zvimwechetezvo, nekuti nhau dzinomhanya kuburikidza nemidhiya sepfuti. Ino nguva zviuru makumi matatu zvakatengeswa, asi zvinofungidzirwa kuti anogona kuve nemamwe mashoma maari, kunyanya miriyoni yawo. Zviito zvese izvi vane kukosha kweanosvika mamirioni zana emadhora mumusika uripo, shanduko diki ...
Mikana yakapihwa nekuve neese aya masheya ekambani ari maari anoshamisa, asi kana iri iriwo Apple, hatitombodi kufungidzira zvazvinoreva. Kunyangwe dai zvinhu zvaive zvakaipa, zvakashata chaizvo muchiratidzo cheapuro yakarumwa, kutengeswa kwayo kwaizove kwakanyanya kunaka kwazvo kune muridzi weiyo imwecheteyo. BKurasikirwa nemubhadharo chinhu icho chinzvimbo chese chepamusoro chekambani iyi chingaite zvakadzikama, nekuti pakupedzisira, kuva nesarudzo yekuva nemasheya aya pasi peruoko rwako kunogona kutombofungidzira (zvinoenderana nemitengo yemusika wemari) bhenefiti kumubati weizvi uye nezvimwe kana tikataura pamusoro pemari hombe iyi.
Mamwe makambani anosarudza kuisa muganho pane huwandu hwezvikamu zvinogona kutengwa neumwe neumwe mukuru, mune izvi zvinoonekwa kuti muganho uyu haupo uye Tim Cook ndemumwe wevarume vane simba rekutenga zvakanyanya pasirese, zvakare kuverenga "iyo yemusango kadhi" yezviito zvainazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Tim Cook akatengesa makumi matatu ezviuru anosvika madhora zviuru mazana matatu nematanhatu